(UPDATE) CDC dia namoaka hafatra maika ho an'ny Amerikanina vita vaksiny amin'ny Pfizer
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Etazonia Vaovao Vaovao » (UPDATE) CDC dia namoaka hafatra maika ho an'ny Amerikanina vita vaksiny amin'ny Pfizer
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Ny filoham-pirenena amerikana Biden sy ny matihanina amin'ny fitsaboana any Etazonia dia samy nanana fanambarana hafa momba ny tifitra booster COVID-19 fahatelo Androany ny Center for Disease Control and Prevention any Etazonia dia namoaka tolo-kevitra marina momba ilay tifitra booster androany, farafaharatsiny ho an'ny Pfizer vaksinina.
UPDATE: Fanavaozana Booster Shot momba an'i Moderna sy Johnson Johnson navoaka androany.
kitiho eto mamaky.
Androany, ny talen'ny CDC, Rochelle P. Walensky, MD, MPH, dia nanohana ny tolo-kevitry ny Komity Mpanolo-tsaina CDC momba ny fomba fanaovana tsimatimanota (ACIP) ho an'ny tifitra booster ny vaksinin'ny Pfizer-BioNTech COVID-19 amin'ny mponina sasany ary koa nanolotra doka fanentanana ho an'ireo amin'ny sehatra asa sy andrim-panjakana mety hampidi-doza.
Ny fahazoan-dàlana an'ny Food and Drug Administration (FDA) sy ny fitarihan'ny CDC hampiasaina dia dingana manandanja rehefa miasa izahay hijanona eo alohan'ilay virus ary hitazona ny Amerikanina ho voaro.
Ity torolàlana vonjimaika avy amin'ny CDC ity dia ahafahan'ny Amerikanina an-tapitrisany izay atahorana indrindra hahazo ny COVID-19 hahazo tifitra booster Pfizer-BioNTech COVID-19 hanampy hampitombo ny fiarovana azy ireo.
Manoro hevitra ny CDC:
olona 65 taona no ho miakatra ary mponina amin'ny toerana fikarakarana maharitra tokony mahazo tifitra fanentanana ho an'ny vaksinin'ny Pfizer-BioNTech's COVID-19, farafahakeliny 6 volana aorian'ny andiany voalohany Pfizer-BioNTech,
olona feno 50–64 taona miaraka amin'ny ny aretina tokony mahazoa tifitra fanentanana ho an'ny vaksinin'ny Pfizer-BioNTech's COVID-19 ao 6 volana farafahakeliny aorian'ny andiany voalohany an'ny Pfizer-BioNTech,
olona feno 18–49 taona miaraka amin'ny ny aretina mety mahazoa tifitra fanentanana ho an'ny vaksinin'ny Pfizer-BioNTech's COVID-19, farafahakeliny 6 volana aorian'ny andiany voalohany Pfizer-BioNTech, mifototra amin'ny tombony sy ny loza mety hitranga amin'izy ireo, ary
olona antitra 18-64 taona izay atahorana hitera-doza kokoa amin'ny fihanaky ny COVID-19 noho ny toerana misy ny asa na ny andrim-panjakana metymahazo tifitra fanentanana ho an'ny vaksinin'ny Pfizer-BioNTech's COVID-19, farafahakeliny 6 volana aorian'ny andiany voalohany Pfizer-BioNTech, miorina amin'ny tombony sy risika avy amin'izy ireo.
Betsaka ny olona afaka mahazo «booster shot» no nahazo ny vaksininy voalohany tany am-piandohan'ny programa fanaovana vaksiny ary handray soa amin'ny fiarovana fanampiny. Miaraka amin'ny fanapahan'ny Delta variant rehefa mihombo ny rahona sy ny tranga COVID-19 mitombo manerana an'i Etazonia, ny tifitra booster dia hanampy amin'ny fanamafisana ny fiarovana amin'ny aretina mahery amin'ireo mponina izay atahorana ho tratry ny COVID-19 na ireo fahasarotana. avy amin'ny aretina mafy.
Ny CDC dia hanohy hanara-maso ny fiarovana sy ny fahombiazan'ny vaksinin'ny COVID-19 mba hiantohana ireo tolo-kevitra mety hitandrina ny Amerikanina rehetra. Hodinihintsika ihany koa ny angona misy ny fahamehana toy izany amin'ny herinandro ho avy mba hanomezana soso-kevitra fanampiny ho an'ny mponina hafa na olona nahazo vaksiny Moderna na Johnson & Johnson.
Dr. Walensky nanao hoe:
Amin'ny maha-talen'ny CDC ahy dia anjarako ny mamantatra hoe aiza no misy akony lehibe indrindra amin'ny fihetsika ataontsika. Ao amin'ny CDC, isika dia asaina mandinika ny angona sarotra, matetika tsy tonga lafatra mba hanao tolo-kevitra mivaingana izay manatsara ny fahasalamana. Amin'ny areti-mandringana, na dia misy tsy fahatokisana aza dia tsy maintsy mandray andraikitra izay ampoizintsika fa hahasoa indrindra.
Mino aho fa afaka manompo amin'ny fomba tsara indrindra ny filan'ny vahoaka amin'ny fahasalaman'ny firenena amin'ny alàlan'ny fanomezana fatra fanentanana ho an'ireo be antitra, ireo izay manana toeram-pitsaboana maharitra, ireo olona manana toe-pahasalamana ambanin'ny tany, ary ho an'ireo olon-dehibe atahorana ho tratry ny aretina avy amin'ny fampandrenesana asa sy andrim-panjakana hatramin'ny COVID-19 . Izy io dia mifanaraka amin'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny famporisihan'ny FDA ary mahatonga ireto vondrona ireto ho mendrika trombaka. Androany, ny ACIP dia tsy nandinika afa-tsy ny angona momba ny vaksinin'ny Pfizer-BioNTech. Hiresaka, miaraka amin'ny fahatsapana fa mahamaika ihany, ny tolo-kevitra ho an'ny vaksinin'ny Moderna sy J&J vantany vao misy ireo angona ireo.
Na dia dingana voalohany mifandraika amin'ny fampiroboroboana aza ny hetsika androany, dia tsy hanelingelina ny fifantohanay voalohany amin'ny fanaovana vaksiny voalohany any Etazonia sy manerantany. Te-hisaotra ny ACIP aho noho ny fifanakalozan-kevitra sy fandinihana siantifika momba ny angon-drakitra misy ankehitriny izay nampahafantatra ny tolo-kevitro.
Teresa Crawford hoy:
September 25, 2021 ao amin'ny 17: 53
SMH… Manokana fotoana hamaliana ireo sarany aho !!! Heveriko fa tsy nahatratra ny fara tampony tamin'ny famonoana ny vaksininy…
Noho izany, ny mpanao gazety sandoka dia tsy maintsy manosika ity fitantarana adala momba ny go get booster ity! Mampalahelo tokoa ny mahita olona maro adala amin'ny finoana an'io lainga io!
September 25, 2021 ao amin'ny 14: 26
Marina izany. Saika mino anao aho.
Kathy Ward hoy:
September 25, 2021 ao amin'ny 10: 20
Afaka mahazo booster Pfizer ve ianao raha nahazo ny vaksiny moderna